တစ်ဦးချင်းစီ7/ 24 ကွန်ပ Service ကိုဝန်ဆောင်မှုမှတူရကီပွိုင့် - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်တစ်ဦးချင်းစီ7/ 24 ကွန်ပ Service ကိုဝန်ဆောင်မှုမှတူရကီပွိုင့်
တစ်ဦးချင်းစီ7/ 24 ကွန်ပ Service ကိုဝန်ဆောင်မှုမှတူရကီပွိုင့်
turkiyenin ဝန်ဆောင်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမှတ် compressed ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်များတွင်အသုံးပြု Compressor ၏အလုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့နည်းစေသည်။
အသီးအသီးအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သံတွန်းတွန်းတည်းဖြတ်မူများကိုနှင့်အတူပြည့်စုံန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တူရကီ7/ 24 ဝန်ဆောင်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမှတ်မှာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
မူရင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့နှင့်အုပ်စုဝက်အူ Compressor အပေါငျးတို့သအမှတ်တံဆိပ်များ၏ပြုပြင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏တည်းဖြတ်မူဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
သံကွန်ပ Service ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုန်ဆောင်မှုများအတွက်ထုတ်လုပ်သူများကသတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းစနစ်များနှင့်အညီလုပ်ကိုင်ရန်။
ဦးထုပ် screw နှစ်ခု၏ Group မှမူရင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့လှည့်နိုင်ပါသည်ဝေမျှမှာတည်ရှိပါတယ်မူရင်းနှင့်အညီပြုပြင်ကြခဲ့စစ်ဆင်ရေးပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုအညီဖျော်ဖြေနေသည်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အဆိုပါကွန်ပရက်ဆာ၏ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်နေတာစက်၏အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုတို့အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ စီးပွားရေးကွန်ပရက်ဆာကို Maintenance န်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်တွန်းပျက်ကွက်သံစောင့်ရှောက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဆုံးရှုံးမှုချွေတာတစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ်တံဆိပ်တွန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုန်ဆောင်မှုကိုပေးတော်မူ၏။
ထိုကဲ့သို့သောလဲလှယ်အဖြစ်လဲလှယ်စစ်ဆင်ရေး Case အဆိုပါပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အထင်ကရအဆောက်အတစ်ခုဖြစ်သည်ဆလင်ဒါသဘောထားပြင်းထန် honing အာမခံသည့် crank ဝံချိတ်ဆက်လှံတံကိုဖြစ်စေသောစပါးအောင်မူရင်းပစ္စည်း, အပစ္စတင် circlip အပြောင်းအလဲသုံးပြီး, အတည်းဖြတ်မူထွက်တင်ဆောင်။
Air လေကြောင်းလိုင်းလေမှုတ်စက်ပြုပြင်, သံ Compressor နှင့်အတူပြုပြင်၏ကျယ်ပြန့်ထမ်းဆောင်လေကြောင်းယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်ပစ္စတင် Compressor ၏တိုင်းတာခြင်း, တူရကီရဲ့7/ 24 အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမှတ်တစ်ဦးချင်းစီအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်တွန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
Bursa န်းကျင်, တူရကီ Kemal Demirel မျှော်လင့်ရထားလှုပ်ရှားမှုဆောကျ 18 / 07 / 2018 ... ဒါဟာတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် SHP Group မှအဖွဲ့ဝင် Kemal Demirel အဖြစ် 1991 တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံ Uludag Bursalılarအဆိုပါပို့စကတ်ကိုတွေ့မြင် "ဟုအဆိုပါအနိမ့်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်။ cable ကိုကားတစ်စီးမှာအခမဲ့ရက်ပေါင်း "သင်လူတိုင်း Bursa Uludag တှငျနထေိုငျကွညျ့ပါ, လူတွေကသယ်ဆောင်စေ 1 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်အကြံပြုချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အာဏာရပါတီ ... ကာလဘုရားသုံးဆူ Group မှမှအကြံပြုချက်များ Sözcüနှောင်းပိုင်းအဲလစ်အတွက်ရေကိုလောင်း "ကောင်းတစ်စိတ်ကူးပြည်သူ့နေ့, ဒါပေမယ့်အခမဲ့မမှန်ပါဘူး, ဒါရဲ့ကုန်အံ့ 50 ရောင်းချမှု" ပံ့ပိုးမှုများကို, ဒီလမ်းအတွက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်များကထောက်ခံခဲ့သည်။ ... အ CHP Bursa လက်ထောက် Kemal Demirel, လုပ်ရပ်တွေကိုအရပ်လုံးမှတဆင့်ဖတ်ပါခဲ့ဘူးအသွားအလာမတော်တဆမှုဆန့်ကျင်ရထားလမ်းကမ်ပိန်းအားဖြင့်ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ် Anatolia 2002 ကာလ၏တာဝန်နှင့်အတူပါလီမန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးနောက်2နှစ်များတွင် ...
တိုင်းအမှတ်ယူမှအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့မီထရိုလေ့လာမှုများ! 07 / 09 / 2012 ကြှနျုပျတို့ပွုသညျ့အခါ Kadir "အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမာစတာအစီအစဉ်ကိုကျနော်တို့ 640 ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သည့်ရထားလမ်းစနစ်ကတက်ကီလိုမီတာကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ ကျနော်တို့ဟုသူကဆိုသည် "သည်အထိမြေအောက်ရထား Silivri, Sarıyerနှင့် Beykoz အစ္စတန်ဘူလ်ကနေတိုင်းအမှတ်ယူမှအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas "အစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမာစတာအစီအစဉ်ကိုကြှနျုပျတို့ပွုသောအခါကျွန်တော် 640 ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သည့်ရထားလမ်းစနစ်ကတက်ကီလိုမီတာကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ ကျနော်တို့ဟုသူကဆိုသည် "သည်အထိမြေအောက်ရထား Silivri, Sarıyerနှင့် Beykoz အစ္စတန်ဘူလ်ကနေတိုင်းအမှတ်ယူမှအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်သမ္မတ Topbas ၏ခရီးစဉ်တစ်သတင်းစာဆရာပြီးနောက်သတင်းထောက်များ၏အစီအစဉ်အပေါ်မေးခွန်းများကိုဖြေကြားဟောင်ကောင် Jong-Kyoung ရဲ့နှုတ်ဆက်အတွက်ကိုရီးယားကောင်စစ်ဝန်အထွေထွေသမ္မတနိုင်ငံကနေကွဲကွာ '' ကျောင်းဝန်ဆောင်မှုစွဲချက်ပြုစုပျိုးထောင်ကျင်းပလိမ့်မည်ပါသလား '' သူကမေးခွန်း replied: "ပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေး ...
တင်ဒါမှာ IR အသစ်: Polatli-Konya YHT လိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုလမ်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုအသစ်လမ်းများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြုသောအမှု 12 / 12 / 2012 Polatli-Konya YHT လိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Polatli-Konya YHT လိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် New န်ဆောင်မှုများပစ္စုပ္ပန်ဝန်ဆောင်မှုလမ်းမကြီးများ၏ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များလမ်း 4734 အမှတ် 19 ၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြုသောအမှုတှဲဝန်ဆောင်မှုလမ်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုအသစ်လမ်းများ၏အမှုကိုပြုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် ဒါဟာအေးဂျင့်အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 178916 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး 06280 GAR ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123243399 - 3123115305 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: malzeme@tcdd.gov.t ဃ) ...
Polatli-Konya YHT Project မှတည်ဆဲဝန်ဆောင်မှုလမ်းတိုးတက်စေူခင်းနှင့်အသစ်ဝန်ဆောင်မှုလမ်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ Duru အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 31 / 05 / 2013 TCDD Polatli-Konya YHT Project မှတည်ဆဲဝန်ဆောင်မှုလမ်းတိုးတက်စေူခင်းနှင့်အသစ်ဝန်ဆောင်မှုလမ်း Stop ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၌စုဝေးအဆိုပြုချက်များတွင် (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 08 ဇန်နဝါရီလ 2013 နေ့စွဲတူရကီပြည်နယ်မီးရထားနဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ "Polatli-Konya YHT လိုင်းရှိရင်းစွဲဝန်ဆောင်မှုလမ်းများ "သစ်ကိုဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုဖော်ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါရလဒ်သိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အဆိုပြုချက်နှင့်အတူရပ်တန့်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆောက်လုပ်ရေး 13.318.983 ပေါင်များအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရသွားကဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ 19.741.773,15 ပေါင်များ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမေလ 17 2013 အပေါ်တစ်ဦးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့များအတွက်ဒါဟာနူးညံ့အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ref: ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျာနယ် 1110 / 17 2012 ဒီဇင်ဘာလ (SMAs) Source: ...
Bursa န်းကျင်, တူရကီ Kemal Demirel မျှော်လင့်ရထားလှုပ်ရှားမှုဆောကျ
တင်ဒါမှာ IR အသစ်: Polatli-Konya YHT လိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုလမ်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုအသစ်လမ်းများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြုသောအမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်ခေါင်းများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ marquise လေအေးပေးစက် Compressor ၏5အပိုင်းပိုင်း (220 V ကို AC) ဝယ်ယူတင်ဒါ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Turbo ကွန်ပရက်ဆာကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း (TÜLOMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Turbo ကွန်ပရက်ဆာကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းအလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့Yaptırılacaktır (TÜLOMSAŞ)
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (379) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)